भारत र चीनबाट काठमाडौंमा सामान्य रेल होइन, लिफ्ट रेलको प्रचुर संभावना – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
भारत र चीनबाट काठमाडौंमा सामान्य रेल होइन, लिफ्ट रेलको प्रचुर संभावना
प्रकाशित मिति : २०७५ भाद्र १६
काठमाडौं । चीनबाट पनि रेल र भारतको रक्सौलबाट पनि रेल ! काठमाडौंमा उत्तरी रेल र दक्षिणी रेल । रेलै रेल । तर यी फगत सपनाका रेल नहोलान् भन्ने संभावनालाई नकार्न सकिदैन । विज्ञहरुले भन्न थालेका छन् काठमाडौंमा सामान्य रेलहरु होइन, लिफ्ट रेल चीन र भारत जहाँ पनि आउन र जान सक्छन् ।
पछिल्लो भौगोलिक तथा भौगर्भिक सर्भेअनुसार सामान्य रेल निकै कठिन र प्रायः असंभव जस्तै पनि छन् उत्तरी र दक्षिणी सर्भेमा । हल्ला र प्रचारबाजीका लागि ओली सरकारको संजीवनी बुटी बन्ने र बनाउने ठानिएका यी यार्सागुम्बारुपी रेलका कीराहरुको काठमाडौंको गन्तव्य आकाशको फल सरह हुने भएका छन् ।
रक्सौलबाट काठमाडौं उक्लदा र तिब्बतबाट काठमाडौं ओर्लंदा कतै पचासौं त कतै हजारौं मिटरको उकालो र ओह्रालो बाटो पर्ने प्रारम्भिक सर्भेबाटै छर्लङ्ग हुन आएको छ । रेल र हात्ती सिधा ठाडो उकालोमा हिंड्ने र चढ्ने जातहरु होइनन् ।
तिब्बतबाट काठमाडौं रेल ल्याउँदा कि त पूर्वी नेपाल पुर्याएर कि त पश्चिम नेपाल पुर्याएर घुमाएर ल्याउनु पर्छ । यसरी ल्याउँदा यसमा लाग्ने रकम नेपालको कूल बजेटको आधा शताब्दी (वा ५० वर्ष)को खर्चगर्नु पर्ने छ ।
मोटामोटी मापनअनुसार पनि तराइबाट काठमाडौं रेल उक्लँदा करिब १३०० मिटर उचाइको फरक पर्दछ । त्यस्तै गरी तिब्बतबाट काठमाडौंमा रेल झार्दा ३१०० मिटर ओरालो झर्नुपर्छ । यति ठूलो भौगोलिक उचाइको भिन्नता रेलका लिगहरु बिछ्याउँदै लैजाँदा सिधासिधा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ? अवश्य नै घुमाउनु पर्दछ । सिधै ल्याउन खोज्ने हो भने एक ठाउँसम्म रेल आइपुग्ने, अड्याउने र त्यहाँबाट लिफ्ट लगाएर मुनी झार्ने वा माथि उठाउने गर्नु पर्ने हुन्छ ।
कतै रेल ल्याउने कुरा ‘तिहारका कुरा गर न लाटा, फिनी रोटी खाए झैं हुन्छ’ भन्ने गरे जस्तै त हुने होइन ।